Waad ku qori kartaa wicitaanada ku saabsan Android 11 asal ahaan | Androidsis
Sida loo duubo wicitaanada codka ee ku saabsan Android 11: waxaad ku sameyn kartaa hooyo ahaan
Una cibaaro cusub oo xiiso leh ee Android 11 waa duubista shaashadda waxay kaloo ka shaqeysaa si loo duubo wicitaanka codka; Muuqaal si isa soo taraysa looga baahan yahay adeegsadayaashu inay ku hayaan faylka MP3 wicitaanada kala duwan ee ay sameeyaan iyo kuwa hela.
Shaqadan wuxuu ku jiraa taleefannada Pixel kuwaas oo horey u haystay nooca 11 ee Android; in jidka aad kala soo bixi kartaa mid ka mid ah Wareegtada 'Pixel 5 live', ka Kamaradda Google 8.0 isku mid ah, Pixel Launcher ee noocaas ah ama qof walba inta hartay ee live wallpaper.
1 Shaashadda duubista si loo qoro wicitaanka
2 Cilladaha qaarkood ee habkan
Shaashadda duubista si loo qoro wicitaanka
Una Mid ka mid ah sheekooyinka ugu waaweyn ee Android 11 ayaa leh duubista shaashadda asal ahaan noo ogolaanaya inaan ka dhaqaaqno barnaamijyada dhinac saddexaad; iyo markale mid kale oo ka mid ah astaamahaas oo ay dalbadeen bulshada adeegsadaya OS.
Iyo haddii mar horeba Android 10 waan awoodnay isticmaal barnaamijyada dhinac saddexaad sida ACR Si loo duubo wicitaanada, marka Android 9 aan dhibaato ku qabno waxay kuxirantahay astaanta mobilada, waa kan weyn G laftiisa ee ku faanaya in duubaanka wicitaanka ee Android 11 uu u shaqeeyo arimahaas.
Horay ayaan kuu baranay sida loo duubo shaashadda Android 11 y dhammaan wararka ku jira cusbooneysiintan OS weyn inta badan lagu rakibay meeraha. Sidaas awgeed waxaan:
Kahor ama inta uu codku dhawaaqayo, waxaan dheereyneynaa marinka deg degga ah tilmaam hoos u socota (tan ha moogaanin abka si loogu qoondeeyo mid ka mid ah marin-u-helkan bandhigga dhacdada xigta)
Waxaan raadineynaa duubista wicitaanka degdegga ah oo riix
Xullo makarafoonka isha codka
Tirinta ayaa bilaabmi doonta duubistuna way bilaaban doontaa
Waxaan riixnaa markale si loo joojiyo duubista Baaqa
Cilladaha qaarkood ee habkan
Dabcan, looma sameeyo si otomaatig ah sidii ACR, barnaamij aad u hayso Android iyo mid ka socda Galaxy Store waa nooca shaqeynaya ee loogu talagalay Galaxy Note iyo Galaxy kale. Markii aan si otomaatig ah u sameynin waa inaan gacanta ku duubnaa, in kasta oo munaasabado gaar ah, oo waxaan fahamsanahay inaynaan baahi u qabin duubista wicitaanada oo dhan, maadaama ay aad u wanaagsan tahay.
Ku saabsan duubista lafteeda Pixel oo leh Android 11, markaad isticmaaleyso shaashadda makarafoonka oo ah isha maqalka halkii aad ka wici lahayd, waxaan u baahannahay inaan shidno codbaahiyaha si aan u maqalno wicitaanka soo socda duubista; tanina waxay noqon kartaa dhib la'aan haddii aan ku suganahay meel fagaare ah, marka waa loo daayay in si gaar ah loogu sameeyo xafiiska ama gurigeenna oo aanan ku lahayn buuq dibadeed.
Dhinaca kale, marka la helayo shaashad duubitaan sidoo kale waxaa ku jira codka, sidaa darteed waxaan u baahan doonnaa barnaamij dhinac saddexaad ah si aan codka uga soo saarno feylka keenay; Waxaan kugula talineynaa fiidiyowgaan saaxiibkeen Francisco oo ku tusaya sida codka looga soo saaro faylkaas.
Waxaa jira xisaabta ku darso arrinta sharciga waddanka aan joogno, maxaa yeelay dhammaantood ma oggola duubista wicitaannada. Isbaanishka marwalba waan ku sameyn karnaa adeegsi gaar ah. In kasta oo barnaamijka taleefanka Google uu u oggolaanayo duubista wicitaanka waddamada qaarkood, halkan wali ma ogin haddii aan uga faa'iideysan karno bedqabka imanaya.
Hadda waxaan haynaa tijaabi sida nooca cusub ee Android 11 u imanayo inta ka hartay noocyada haddii duubista shaashadu shaqeyso inta aan ku jirno wicitaan; runti waan awoodnaa dooro One UI 3.0 beta ee Galaxy S20 OxygenOS 11 ee OnePlus 8.
Beddel weyn kuwa u baahan in la duubo wicitaanada mana haystaan ​​ikhtiyaarka barnaamijka Telefoonka moobaylkooda markii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo duubo wicitaanada codka ee ku saabsan Android 11: waxaad ku sameyn kartaa hooyo ahaan
Samsung Galaxy A02s waxay lahaan doontaa batariyada fadeexada
Realme C15 Qualcomm Edition ayaa lagu shaaciyey Snapdragon 460 iyo batari 6.000 mAh